ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ယေရှုခရစ်တော်၏ဗျာဒိတ်တော်
ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်ပြထားတဲ့ အနှစ်သာရကို “ဖတ်” တစ်ခုတည်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ဒီနေရာကို အရင်လာမယ့်သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်မိပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ ဒီစိတ်ထဲက သင်အများစုဟာ သဘောတရားကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်ပေမယ့်၊ သင့်နှလုံးသားနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင် ပေါ်ထွန်းခြင်းကို သင် လွဲချော်နေဆဲပါပဲ – ပြီးတော့ အဲဒါကို လွဲချော်သွားခဲ့ရင် သင်ဘယ်လိုနားလည်သွားမလဲ။ ကိုယ်တော်၏အကူအညီ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပုံကို သင်မသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ကူညီပေးပါစေ။ ယေရှုခရစ်၏ စစ်မှန်သောသစ္စာရှိကျေးကျွန်တစ်ဦး၏ စိတ်နှလုံးကို တောင့်တသော သို့မဟုတ် အလိုရှိသူများအတွက် ဤအကျဉ်းချုပ်ကို ကျွန်ုပ်ပေးပါသည်။ ကြွင်းသောသူတို့အား ကရုဏာတော်ရှိပါစေသော။
အမှန်မှာ မည်သည့်စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် လူသား၏သေစေတတ်သောနားလည်သဘောပေါက်မှုသည် “ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်” ကို အပြည့်အဝလက်ခံနိုင် သို့မဟုတ် ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ “ဘုရားသခင်” သည် အလွန်ကြီးမားသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်ပေါလုက ၁ ကောရိန္သု ၁၃:၈-၁၀ တွင် “ပရဟိတဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပျက်ဘူး။ပရောဖက်ပြုချက်ရှိလျှင် ပျက်လိမ့်မည်။ လျှာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ပညာရှိလျှင် ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိ၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပရောဖက်ပြုကြ၏။ စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါ၌မူကား၊ ထို့ကြောင့် ဤဘလော့ဂ်သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုကို ရှင်းပြရန်သာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဘလော့ဂ်နှင့်မတူဘဲ၊ ကျွန်ုပ်သည် အခါအားလျော်စွာ ပြန်သွားကာ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် စာမျက်နှာကို ထပ်မံတည်းဖြတ်မည်ကို နားလည်ရပါမည်။ တမန်တော်ယောဟန်က ဤသို့ဆိုသည်– “ယေရှုပြုတော်မူသော အခြားအမှုများစွာလည်းရှိ၏၊ ထိုအရာတို့သည် တစ်ခုစီတိုင်းကို ရေးထားမည်ဆိုလျှင်၊ ဤလောက၌ပင် ရေးထားသင့်သောစာအုပ်များ မဆံ့နိုင်ဟု ငါထင်၏။ အာမင်။” (ယောဟန် ၂၁:၂၅) ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဆုတောင်းချက်မှာ ဤဘလော့ဂ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် နှိမ့်ချပြီး စစ်မှန်သောစိတ်နှလုံးဖြင့် ကိုယ်တော်ကိုရှာဖွေသူတို့အတွက် ကောင်းချီးတစ်ခုနှင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကတော့ အရမ်းမြင့်တဲ့ link တစ်ခုပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တင်ဆက်မှုဖော်မတ် (Google doc အဖြစ်နှင့် PDF ဖော်မတ်တွင် နှစ်မျိုးလုံး.
ကျန်တာတွေကတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုချုံးကို ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အထက်ဖော်ပြပါ တင်ပြမှုမှာ ဖော်ပြထားတာထက် အများကြီး ပိုအသေးစိတ် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါ ။
အခန်း 1 – ယေရှု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ဤဘလော့ဂ်ရှိ “နိဒါန်း” ဝဘ်စာမျက်နှာကို သင်ဖတ်ပါက (မဖတ်ရသေးပါက) ၎င်းသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ပထမအခန်းများစွာကို ကျော်သွားပါသည်။ အစအဦးတွင်၊ “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံချက်အတွက်” နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရခြင်းကြောင့် ပါမုတ်ကျွန်းတွင် “ညီအစ်ကို၊ ဆင်းရဲခြင်း၌အဖော်” ဖြစ်သော သခင်၏သစ္စာရှိကျွန်ယောဟန်ကို ကျွန်ုပ်တို့အစအဦး၌ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဤအမှောင်ဟုထင်ရသော အခြေအနေတွင် (Patmos သို့ နှင်ထုတ်ခံရသူများသည် ထိုနေရာတွင် အမှောင်ဂူတွင်း၌ အလုပ်ခိုင်းစေခံရကြောင်း သမိုင်းကပင်လျှင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်) ယေရှုခရစ်သည် ယောဟန်၏ဝိညာဉ်တော်၌ရှိနေစဉ်တွင် ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင် ရုတ်တရက် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအခြေအနေများတွင် ဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားသည် အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် (မကောင်းသောကာလ၌ပင်) ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခါးသီးပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ခါးသီးသောအခြေအနေတွင်ရှိသူတစ်ဦးသည် ယေရှုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ပြီး ကရုဏာရှိမည်ဖြစ်သည်။ ခါးသီး၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖြောင့်မတ်သောသဘောထားဖြင့် မလုပ်မိစေရန် သတိထားပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုသည် ထိုသူအား နှစ်သက်ဖွယ်လမ်းဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ထုတ်ဖော်တော်မမူ။
ယေရှုသည် ယောဟန်အား သူ၏ထိုက်တန်မှု၊ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်ကို ဦးစွာဖော်ပြသည်။ ယောဟန်သည် “မြေကြီး၏ရှင်ဘုရင်” ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ယေရှုပြသခဲ့သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁:၅) အသင်းတော်အပေါ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများနှင့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများဖြင့် အသင်းတော်မှ ကွဲထွက်သွားသော အတုအယောင်များစွာရှိသော်လည်း၊ ယေရှုသည် ဘုရင်များ၏ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင်ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ ယေရှု၏အလိုတော်သည် ပြည့်စုံဆဲဖြစ်ပြီး လူများကို ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။ သို့သော် သူတို့သည် သူတို့၏အဆုံးတွင် “ဒူးရှိသမျှတို့သည် ငါ့ထံဦးညွှတ်၍၊ လျှာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ခံကြလိမ့်မည်” ဟူသော သူတို့၏အဆုံးတွင် သူတို့၏ရွေးချယ်မှုများအတွက် စာရင်းပြုစုနေကြဆဲဖြစ်သည်။ (ရောမ ၁၄:၁၁)၊
ထိုအခါ ယောဟန်သည် “မြင်ဖူးသောအရာ၊ ဥစ္စာဖြစ်လတံ့သော အရာတို့ကို ရေးမှတ်ရန်” (ဗျာဒိတ် ၁း၁၉)။ သို့မှသာ ယေရှုခရစ်၏ကျေးကျွန်အစစ်များသည် ၎င်းကိုလက်ခံနိုင်ပြီး သစ္စာနှင့်သစ္စာရှိရန် တွန်းအားပေးခံရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ယောဟန်ထံပေးပို့လိုသောသတင်းစကားကို အထူးတလည် ညွှန်ကြားထားပြီး၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သူ၏သစ္စာရှိကျေးကျွန်များကို ထပ်လောင်းဖော်ပြသည်။ သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူဖြစ်သည်၊ သူ၏အသင်းတော်နှင့် သူ၏သစ္စာရှိသတင်းစကားကို သယ်ဆောင်သူများ သို့မဟုတ် ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်သည်။ မူရင်းရှိ ကောင်းကင်တမန် ဟူသော စကားလုံးသည် “သတင်းစကားကို ကိုင်ဆောင်သူ” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ၎င်းတို့တွင် သူ၏ သတင်းစကားကို ဟောပြောရန် ဘုရားသခင် ခေါ်ထားသူများ ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွင်း လုံးလုံးလျားလျားရှိနေသော ယောက်ျားမိန်းမများကို အမြဲအသုံးပြုခဲ့သည် (ဗျာဒိတ် ၁း၂၀၊ “ငါ့ညာလက်၌ရှိသောသူတို့” ဟုဆိုသည်)၊ သူ၏စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားသတင်းကို အခြားသူများထံ ပေးပို့ရန် ဘုရားသခင်သည် အမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် အသင်းတော်7ခု (“မီးခွက်များ” သို့မဟုတ် ဆီမီးတစ်ချောင်း၏ မီးခွက်7လုံး – ဓမ္မဟောင်းတဲတော်ရှိ တူညီသော မီးခုံကို ကိုယ်စားပြုသည်) နှင့် သူသည် ယောဟန်အား ဗျာဒိတ်သတင်းကို ဧဖက်အသင်းတော်ထံ ပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည် 1)၊ Smyrna(2), Pergamos(3), Thyatira(4), Sardis(5), Philadelphia(6), and Laodicea(7)။
အခန်း2နှင့်3– “အသင်းတော်ကို ကျွေးမွေးသော ရစူလ်တမန်တော်ထံသို့…”
ထို့နောက် သူသည် အသင်းတော်အား ကျွေးမွေးရန် တာဝန်ရှိသော ကောင်းကင်တမန်/တမန်တစ်ဦးစီထံ တိကျသောသတင်းစကားတစ်ခု ပေးပို့ပြီး သတင်းတစ်ခုစီကို “ကျွန်ုပ်သိပါသည်” ဟူသော ကြေငြာချက်တစ်ခုစီကို သူသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို အပြည့်အဝနားလည်ကြောင်း ကြေညာကာ သတင်းတစ်ခုချင်းစီကို ဤအတိအကျအတိုင်း အဆုံးသတ်ပါသည်။ သတိပေးချက်– “အသင်းတော်တို့အား ဝိညာဉ်တော် မိန့်တော်မူသောစကားကို နားရှိသောသူသည် ကြားပါစေ။”
ဗျာဒိတ်တော်များသည် ဝိညာဉ်ရေးသတင်းစကားဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲ သင်လက်ခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူသည် သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများကို နားလည်ရန်နှင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နာခံမှုရှိမရှိ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၌ တည်နေစေရန် အနေအထားတွင် ရှိနေစေရန် ၎င်းတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ခမည်းတော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲနေမည်အကြောင်း အခြားသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို ပေးသနားတော်မူမည်။ သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်တော်ပင်၊ လောကီသားတို့သည် မမြင်နိုင်သောကြောင့် မခံမယူနိုင်။ ထိုသူကို မသိကြ။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် သင်နှင့်အတူ ကျိန်းဝပ်၍ သင်၌ရှိလိမ့်မည်။ (ယော ၁၄း၁၅-၁၇)
သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး (ဗျာဒိတ်တော်များအပါအဝင်) သည် ခေတ်ကာလတိုင်းတွင် ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်အစစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာကို ထိုမြို့ကြီး ၇ မြို့တွင်ရှိသော အသင်းတော်များထံ ပေးပို့ခဲ့ပြီး၊ တစ်ခုစီထံသို့ လိပ်မူထားသောအပိုင်းသည် ထိုအချိန်က သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်များကို အတိအကျဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်၊ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကဲ့သို့ပင်၊ ဗျာဒိတ်သတင်းသည် အချိန်တိုင်းခေတ်တိုင်းတွင် အသင်းတော်၏ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် အလွန်သက်ဆိုင်နေသေးပြီး ယနေ့အသင်းတော်၏ ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏7အသင်းတော်ခေတ်
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် အာရှရှိအသင်းတော်7ခုကိုသာမက "ဧဝံဂေလိတရားနေ့" ၏အသင်းတော်7ခုကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပေးသည် သို့မဟုတ် ခရစ်တော်ဦးစွာမွေးဖွားပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို တည်ထောင်သည့်အချိန်ကာလအထိ၊ ဤကမ္ဘာ၏နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပထမကြည့်ရာတွင် ထင်ထင်ရှားရှားမဟုတ်သော်လည်း သတင်းတရားကို လေ့လာပြီး ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုမှ ဟောပြောသောကြောင့်၊ ဤအထူးသဖြင့် "အာရှရှိအသင်းတော်7ခု" ဟူသော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ "ဧဝံဂေလိတရားနေ့" သမိုင်းတစ်လျှောက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားရှိခဲ့ကြောင်း သိသာထင်ရှားပါသည်။ အထူးသဖြင့် အခြေအနေများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိခဲ့သည်။ “ဧဖက်အသင်းတော်ခေတ်” နှင့် “စမုရနအသင်းတော်ခေတ်” စသည်တို့ရှိခဲ့ပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်များကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ယနေ့ခေတ်တွင် ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများ မည်သို့ဖြစ်တည်လာပုံနှင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်အစစ်များ မည်သို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြသည်ကို တမန်တော်ပေါလုက ကောရိန္သုမြို့သားများအား မည်သို့ရှင်းပြခဲ့သည်ကို သိမြင်နားလည်နိုင်စေရန် သင်ခန်းစာအဖြစ် ယနေ့ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးချနိုင်ပြီး၊ သူတို့သည် အတိတ်ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေမှတ်တမ်းတစ်ခုမှလည်း သင်ယူနိုင်သည်– “ယခုအခါ ဤအရာများအားလုံးသည် ၎င်းတို့အတွက် သာဓကများအဖြစ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး၊ ဤအရာများကို ကမ္ဘာကုန်ခါနီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်အတွက် ရေးမှတ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လဲကျခြင်းငှာ မတ်တတ်ရပ်သည်ဟု ထင်မှတ်စေ။ (၁ ကောရိန္သု ၁၀:၁၁-၁၂)
ဗျာဒိတ်များအပါအဝင် သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးသည် အချိန်တိုင်းခေတ်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ထိုဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေတစ်ခုတည်းသာရှိခဲ့သည်ဟု မဆိုလိုတော့သောကြောင့် လူတိုင်းသည် မိမိတို့လိုအပ်သော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုကို အချိန်မရွေးရနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးသည် ခေတ်တိုင်းလူတိုင်း၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ထိုအချိန်က သူတို့၏နားလည်မှုအတတ်နိုင်ဆုံး၊ သူတို့သိထားသည့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံး၏ ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာများကို အသုံးချသည့် စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခု အမြဲရှိခဲ့သည်။ (တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်းကို ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများပေါ်ထွန်းခြင်းမှ အပြင်သို့ယူသွားသောအခါ၊ ပကတိအရာများနှင့် အဖြစ်အပျက်များအပေါ် ပို၍အာရုံစိုက်လာသည်၊ ယင်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုများရှိလာနိုင်သည်။) ၎င်းကိုနောက်ထပ်တစ်လှမ်းတိုးရန်၊ အသင်းတော်၏တိုက်ပွဲများနှင့် အထူးရင်းနှီးသူတစ်ဦးထံ၊ ဤနောက်ဆုံးသောကာလတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီ၊ ဤ “အာရှရှိအသင်းတော်7ပါး” ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများ ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်၏ကျေးကျွန်စစ်စစ်များနှင့် လမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လျှောက်နေမည်ဆိုပါက ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်တစ်ခုလုံးသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။
ဆဌမမြောက်အသင်းတော်၊ Philadelphia တွင်ယေရှုက "ဖွင့်ထားသောတံခါးကိုအဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်ပါ။" သို့သော် လာမည့်အသင်းတော်ခေတ်၊ လောဒိကိတွင်၊ တံခါးကိုပိတ်ရန် ယေရှု ခေါက်လျက်ဖွင့်ခိုင်းသော အခြားတံခါးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရ၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုဟာ သူတို့စိတ်နှလုံးကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ သခင်ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်– “ကျော်လွှားရန် ငါ့အားဖွင့်ပြောရမည်။
ဒါကြောင့် ကျော်ဖြတ်ဖို့ ဒီနေ့ ငါတို့ နှလုံးသားကို ပြန်ဖွင့်ရမယ်။ ထိုအခါ ယောဟန်ကဲ့သို့ပင်၊ ဖိလဒဲဖီးယားတွင် ယေရှုဖွင့်သောတံခါးသည် ပွင့်ဆဲဖြစ်သည်ကို နောက်မှတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အခန်း ၄ – ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ပတ်လည်၌ ကိုးကွယ်ခြင်း ဝိညာဉ်တော်
အသင်းတော်တစ်ခုစီအတွက် သီးခြားလိပ်စာပေးပြီးနောက်၊ ယောဟန်သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၏ ဝိညာဉ်တော်၌ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော ပလ္လင်တော်တစ်ဝိုက်တွင် မရေမတွက်နိုင်သော ကောင်းကင်တမန်များ အစုအဝေးနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ကို သူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခု ယောဟန်သည် သူ၏လူသားမျိုးနွယ်ကို မဆုံးရှုံးခဲ့ဘဲ၊ သမ္မာကျမ်းစာအရ စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများသည် ခေတ်တိုင်းတွင်ရှိကြသကဲ့သို့၊ “သင်တို့သည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့လည်းကောင်း၊ မြို့တော်သို့လည်းကောင်း ရောက်ရှိလာကြပြီ။ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့နှင့် မရေမတွက်နိုင်သော ကောင်းကင်တမန်များအပေါင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရေးထားသော သားဦး၏အသင်းတော်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရေးထားသော သားဦး၏အသင်းတော်၊ လူအပေါင်းတို့၏တရားစီရင်တော်မူသော ဘုရားသခင်အားလည်းကောင်း၊ ဟေဗြဲ ၁၂:၂၂-၂၃)
အခန်း ၅ – ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်
“ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်” ယောဟန်က “ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်သာလျှင်” (ယောဟန် ၁:၂၉) သာလျှင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် နားလည်မှုဖွင့်ပေးနိုင်ကြောင်းကို ယောဟန်က ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။7“ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောသူ၏ လက်ယာလက်” တွင် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဆေးကြောသောသိုးသငယ်၏အသွေးအားဖြင့်သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် “တဖန်မွေးဖွားခြင်း” ခံရနိုင်ပြီး နက်နဲသောဝိညာဉ်ရေးရာများကိုမြင်နိုင်နားလည်နိုင်သောဝိညာဉ်ရေးမျက်လုံးအစုံရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ထိုအချိန်က ကျမ်းစာပညာအတတ်ဆုံးလူတစ်ဦးအား “လူသည် တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းမှလွဲ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်နိုင်” ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (ယောဟန် ၃:၃) စစ်မှန်သော “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်” ကိုကြည့်ရှုခြင်းသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းများအကြောင်းနှင့် များစွာသက်ဆိုင်သည်– ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ ယေရှု၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ အို လူများစွာအတွက် ဝမ်းနည်းစရာ ဝမ်းနည်းစရာ ပေါ်ထွန်းချက်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လူတော်တော်များများက အဲဒါကို ရိုးရိုးသားသား လေ့လာကြည့်ချင်စိတ်တောင် မရှိကြဘူး။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး4နှင့်5တွင် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏သားတော် တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကို ကိုးကွယ်နေသည့် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်တဝိုက်တွင် လူတို့သည် စစ်မှန်သော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကိုးကွယ်ကြသည်ကို သင် မတွေ့မြင်ရကြောင်း ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး4နှင့်5တွင် သင် သတိပြုမိလိမ့်မည် - ခေတ်ကြီးသော တရားဟောဆရာများ ဘာသာတရားများစွာ၊ အသင်းတော်များကို ပိုင်းခြားထားခြင်း၊ အယူဝါဒများစွာကို တင်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်အား အမှန်တကယ် စိတ်နှလုံးကို အပ်နှံပြီး ကိုယ်တော်ကို ရှာဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နေကြသောအခါတွင် တွေ့ရလိမ့်မည်– “သင်တို့သည် ပဌနာပြုခြင်းအတွက် မြော်လင့်ခြင်းအားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း၌ တညီတညွတ်တည်း ခေါ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ တစ်ဆူတည်းသောသခင်၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတစ်ဆူ၊ ခပ်သိမ်းသောဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရှင်၏အဘ၊ (ဧဖက် ၄:၄-၆) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတုအယောင်ကိုးကွယ်သူများနှင့် မှောက်မှားသောဘာသာရေးအယူဝါဒများသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏အမှန်တကယ်မျက်မှောက်တော်ရှေ့တွင် မရပ်တည်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်– “ထို့ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်း၌မတရားသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၌ မရပ်ရ၊ (ဆာလံ ၁:၅)
အခန်း ၆ – ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်သည် တံဆိပ် ၇ လုံးကိုဖွင့်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ယေရှုသည် စာအုပ်ပေါ်ရှိတံဆိပ်တုံးများကိုစဖွင့်ပြီး စစ်မှန်သောဘုရင်၏ဘုရင်သည် “အောင်နိုင်ခြင်း၊ အောင်နိုင်ခြင်း” ပေါ်ထွက်လာသည်ကို ချက်ချင်းတွေ့မြင်ရသည်၊ သို့သော် အခြားသူများနှင့် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ အတိုက်အခံအင်အားစုများ။ မြင်းများနှင့် မြင်းစီးသူများသည် စစ်တိုက်မည့်နိုင်ငံများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော် ဗျာဒိတ်ကျမ်းများသည် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲများကို ဖော်ပြသည့် ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သောကြောင့် လူတို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ထင်မြင်ယူဆထားသည့် ပကတိနိုင်ငံတော်များမဟုတ်ပါ။
ဒါဆို ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာ ဘာများ အကျုံးဝင်နေလဲ။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိနေသော တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာများ- နှလုံးသားများ (သူတို့အား မြှုပ်နှံထားသည့်) နှင့် လူတို့၏ ထာဝရဝိညာဉ်များ။ မာရ်နတ်သည် သူ၏ညစ်ညမ်းသောအလုပ်ကို ပြီးမြောက်ရန် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံများကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းသည် “အဆုံးတိုင်ရန်” သာဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ မမှားပါနှင့်။ အဆုံးစွန်သောရည်ရွယ်ချက်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ နှလုံးသားနှင့် ဝိညာဉ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြည့်အ၀ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဆည်းကပ်ခြင်းတို့ဖြင့်၊ သခင်ယေရှုခရစ်သည် သင်၏ အပြည့်အ၀မြှုပ်နှံထားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သင့်ဝိညာဉ်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အဆုံးစွန်သောစျေးနှုန်းကို ပေးချေခဲ့သည်။ မာရ်နတ်သည် သင့်အား ခရစ်တော်အား အနိုင်ယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်အပေါ် သစ္စာရှိခြင်းမှ သင့်ကို ဆွဲထုတ်ရန် အာရုံငါးပါးနှင့် လှည့်ဖြားသော သွန်သင်ချက်အားလုံးကို အသုံးပြုထားသည်။ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲက ဘယ်ဘက်ရောက်နေလဲ သိလား။ သင်သည် သခင်ယေရှုအပေါ် လုံးဝသစ္စာရှိပါသလား။
စစ်ပွဲတိုင်းရဲ့ ရလဒ်တွေထဲက တစ်ခုက ဘာလဲ။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနှင့် အသေအပျောက်များ။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ဝိညာဉ်ရေးစစ်ပွဲတွင် ယေရှုခရစ်အား သစ္စာရှိရှိအပ်နှံထားသူများအား နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည် (ခရစ်ယာန်စစ်များအတွက်မူ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ မယုံကြည်သူများကို ဓားနှင့်သေနတ်များကိုင်ဆောင်ကာ သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးခြင်းမျိုး တစ်ခါမျှမဖြစ်ဖူးပါ။) ခရစ်ယာန်စစ်များသည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏များစွာအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ခရစ်တော် ကမ္ဘာမြေသို့ ပထမဆုံးကြွလာချိန်က စတင်ခဲ့သော “နေ့ရက်” ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပထမတံဆိပ်လေးခုသည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့အတွင်း ဤဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲ မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြသည် - ထို့နောက် ပဉ္စမတံဆိပ်သည် ဤတိုက်ပွဲများ၏ရလဒ်ကို ပြသသည်- “ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ယဇ်ပလ္လင်အောက်၌ ငါမြင်၏။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် အသေခံခြင်း နှင့် သက်သေခံခြင်းအတွက် အသေခံခဲ့ကြသော ဝိညာဉ်များသည်၊ အိုထာဝရဘုရား၊ သန့်ရှင်း၍ မှန်သော၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး အကျွန်ုပ်တို့၏ အသွေးကို မစီရင်ဘဲ လက်စားချေတော်မူပါဟု ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့် ကြွေးကြော်လျက်၊ မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့၊ ဖြူသောသင်္ကန်းကို အသီးသီး ပေးကြ၏။ ကျွန်ချင်းတို့ ညီအစ်ကိုတို့လည်း သတ်သင့်သည်အတိုင်း သူတို့သည် မပြည့်စုံမှီတိုင်အောင် ခေတ္တခဏ အနားယူရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ဗျာဒိတ် ၆:၉-၁၁) မှတ်ချက်- ခရစ်ယာန်များအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော သမိုင်းဝင်စာအုပ်များစွာကို ရေးသားထားသည်။ လူသိအများဆုံးမှာ "Fox's Book of Martyrs" ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် ဘုရားသခင့်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ထုတ်ဖော်ပြသပုံတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားသည်ထက် ကွဲပြားသောကြောင့် ပဉ္စမတံဆိပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသထားသည့် ပိုအရေးကြီးသောအရာနှစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏လမ်းသည် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းစဉ်ထက် မြင့်မားသည်။
ရှေးဦးစွာ၊ ဗျာဒိတ် ၆:၁၁ မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းသည် ပရောဖက်ပြုချက်၏ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ဖြစ်လာမည်ကို သိတော်မူပြီး လူဆိုးများနှင့် ဆိုးသွမ်းသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်အတွက် ပြီးမြောက်သည်ဟု ထင်မြင်နေသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သည် ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ သားတော်ယေရှုခရစ်အပေါ် စစ်မှန်သောမေတ္တာသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ခံရသူများ၏အသက်တာတွင် သစ္စာရှိပြီး စစ်မှန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သစ္စာရှိသူ၏ ဤသက်သေခံချက်သည် ၎င်းတို့အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများကို ဆန့်ကျင်သည့် ခိုင်လုံသောသက်သေဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများ၏ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့် ခြားနားမှုကြီးစွာသော အလင်းနှင့် ခြားနားချက်ကို အခြားဝိညာဉ်များအတွက် သက်သေခံရန် လမ်းစပေးပါသည်။ .
ဒုတိယ၊ ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး ၄ နှင့် ၅ တွင်ရှိသော ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ပတ်လည်ရှိ ဝတ်ပြုသူများကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပလ္လင်အောက်၌လည်း မတွေ့ရတော့ပေ၊ ခေတ်ကြီးသောတရားဟောဆရာများ၊ မိမိတို့နှစ်သက်ရာ အယူဝါဒ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်အပေါ် ငြင်းခုံတိုက်ခိုက်နေသူများကိုလည်း မတွေ့မမြင်ပါ။ သို့သော် “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် အသေခံသောသူတို့၏ ဝိညာဉ်များကိုလည်းကောင်း၊ သက်သေခံတော်မူချက်အတွက်လည်းကောင်း” (ဗျာဒိတ် ၆း၉)။ သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်၏ သက်သေခံချက်ကို ကိုင်စွဲထားသည်။ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာယဇ်သည် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး၏ အဓိကသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အခြားသူတစ်ဦးကို ကွဲပြားခြင်းနှင့် မုန်းတီးသောသဘောထားဖြင့် ပြုလုပ်၍မရပါ။ “ထို့ကြောင့် သင်၏လက်ဆောင်ကို ယဇ်ပလ္လင်သို့ဆောင်ခဲ့၍ သင်၏အစ်ကိုသည် သင့်အား ပြစ်မှားသည်ဟု အောက်မေ့လျှင်၊ ပူဇော်သက္ကာကို ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ထား၍ သွားလော့။ မင်းအစ်ကိုနဲ့ အရင် မိတ်ဖွဲ့ပြီးမှ မင်းလက်ဆောင်ကို လာလှူပါ" (မဿဲ ၅:၂၃-၂၄)
အမှောင်ခေတ်အတွင်း သမ္မာကျမ်းစာကို သိမ်းပိုက်ခံရခြင်းနှင့် အများစုကြားတွင် အောင်မြင်ခဲ့သော ပညာရေးချို့တဲ့မှုကြောင့် လူများစွာသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် အယူဝါဒအားလုံးကို သိရှိရန် အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ကြပေ။ ကယ်တင်ခြင်းအလကားဆုကျေးဇူးအားဖြင့် ယေရှုခရစ်နှင့် သူ၏ကြီးမားသောမေတ္တာကို လူများစွာ သိနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအယူဝါဒအသိပညာမရှိနိုင်သော်လည်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်မေတ္တာအပြည့်ဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်တွင် ကွဲပြားခြင်းမရှိပါ။ ယနေ့ ဝိညာဉ်ရေးရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် ပူဇော်ထားသော ကိုယ်ကျိုးစွန့်မေတ္တာကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ အသိပညာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အနစ်နာခံတဲ့ အချစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မည်မျှမှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ အယူဝါဒများနှင့် အယူအဆများကို စုစည်းရုံမျှဖြင့် သင်သည် မည်သည့်အခါမျှ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပေ။ သင် ... ရမည် ကိုလည်း ပူဇော်ရာပလ္လင်မှာ စုဝေးဖို့ မေတ္တာပို့ကြပါ။
ဘုရားသခငျ၏သိုးသငယ်ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါစစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကိုမှုတ်သွင်းသောပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြသသောယဇ်ပူဇော်သောမေတ္တာပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် ခေတ်အဆက်ဆက် လူတို့ဖန်တီးခဲ့သော ဘာသာရေးအယူဝါဒများကို စွန့်လွှတ်ကာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ စစ်မှန်သောစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ 1800 နှောင်းပိုင်းနှင့် 1900 အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ဤအရာသည် အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအသင်းတော်သည် အတူတကွစုရုံးပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းခြားသိမြင်သူတိုင်း မြင်သာထင်ရှားလာခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များ ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် အလွန်ဂုဏ်အသရေရှိပြီး သူသာလျှင်လုပ်နိုင်သောအရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆဋ္ဌမတံဆိပ်တွင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ တတ်စွမ်းနိုင်သောအရာများ- ကြီးစွာသော မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ နေမည်းခြင်း၊ လသွေး၊ ကောင်းကင်ကြယ်ကြွေကျခြင်း၊ လေပြင်းများ၊ ကောင်းကင်များ တပေါင်းတစည်းတည်း လှုပ်နေသော ကျွန်းများနှင့် တောင်များ၊ ပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်း။ ဤအရာများအားလုံးသည် လူတို့၏ “မြေကြီး” ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်၏ ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်။ (“ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်” တွင် ခြုံငုံ၍မရနိုင်သော နောက်ထပ်အရာများစွာ ရှိပါသေးသောကြောင့် ဤအရာအား ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီမှ စတင်ဖော်ပြရန်အတွက် သင်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။) သို့သော် ဆဋ္ဌမတံဆိပ်တွင် အရေးကြီးဆုံးမှာ- “သူ၏နေ့ကြီး၊ အမျက်တော်သည် ရောက်လာပြီ။ ဘယ်သူ ရပ်တည်နိုင်မှာလဲ” (ဗျာဒိတ် ၆:၁၇) ယေရှု၏သစ္စာနှင့်သစ္စာရှိကျေးကျွန်များ၏အသက်နှင့်သြဇာအာဏာကိုညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလူများ၏မှားယွင်းသောအယူဝါဒများနှင့်အသင်းတော်များကိုဆန့်ကျင်ဟောပြောရန်နှင့်ဖော်ထုတ်ရန်စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုကိုဘုရားသခင်စတင်ဘိသိက်ပေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အခန်း ၇ – ဘုရားသခင်ရဲ့ ပလ္လင်တော်ပတ်လည်မှာ ကိုးကွယ်ခြင်း။
ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသော နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်နှင့် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများ၊ ထိုနေရာတွင် ဝတ်ပြုနေသည့် ယေရှုခရစ်၏ကျွန်များကို တစ်ဖန်မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးသူ တယောက်က၊ ဖြူသော ဝတ်လုံကို ၀တ်ထားသော ဤအရာကား အဘယ်နည်း။ သူတို့ ဘယ်ကလာတာလဲ။ ငါကလည်း၊ သခင်၊ သိတော်မူ၏။ ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းမှ ထွက်လာ၍ မိမိတို့၏သင်္ကန်းကိုလျှော်၍ သိုးသငယ်၏အသွေး၌ ဖြူစေသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ ထိုကြောင့်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ရှေ့၊ ဗိမာန်တော်၌ နေ့ညမပြတ် ဝတ်ပြုကြသဖြင့်၊ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်သောသူသည် သူတို့တွင် နေရလိမ့်မည်။ (ဗျာဒိတ် ၇:၁၃-၁၅)
အခန်း ၈ – ကောင်းကင်ဘုံ၌ တိတ်ဆိတ်ခြင်း။
ဖြစ်ချင်တော့။ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်သည် နောက်ဆုံးသတ္တမမြောက်တံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ “နာရီဝက်ခန့် ကောင်းကင်၌ တိတ်ဆိတ်” သည်။ (ဗျာဒိတ် ၈:၁) တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည် လူများတိတ်ဆိတ်နေခြင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်ရေးဘက်ဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝိညာဉ်ရေးတိတ်ဆိတ်ခြင်း—မြေငလျင်၊ မိုးခြိမ်းသံ၊ မိုးသီးမုန်တိုင်းများစသည်ဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် စွန့်လွှတ်လိုက်သည့်အခါ- ယဇ်ပူဇော်သောမေတ္တာ၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးသွားသူများအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်း စသည်တို့သည် - ထို့နောက်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် နွေးထွေးမှု ဝင်လာပြီး ဘုရားသခင်သည် ချီးမြှောက်ခြင်း မခံရပေ။ နိုးထခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်နိုးထရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရာကို ဘုရားသခင်သာလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ယဇ်ပလ္လင်၌ ယဇ်ပလ္လင်၌ ပြင်းပြသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြင့် တဖန်ပြန်လည်စည်းဝေးသည်ကို သူမြင်ရသောအခါတွင် သူသည် မနေနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ် ၈:၂ တွင် တံပိုးခရာ ကောင်းကင်တမန် ၇ ပါး သို့မဟုတ် လူများစုဝေးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တံပိုးမှုတ်သည့် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ (ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လူများကိုသတိပေးရန်နှင့် စည်းဝေးစေရန်အတွက် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက တံပိုးများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။) ထို့နောက် ဗျာဒိတ် ၈:၃ တွင် “သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့” သည် ညနေပူဇော်ပွဲအတွက် ဆုတောင်းခြင်းအတွက် စုရုံးကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ငါ အခု ဝိညာဉ်ရေးအရ ပြောနေတာ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းများရှိ ဘာသာစကားသည် ဓမ္မဟောင်းဝတ်ပြုမှု၏ သင်္ကေတများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းတွင် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ဝိညာဉ်ရေးအမျိုးအစားကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မက်ဆေ့ချ်ကိုသာမက လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် ဖြစ်ပျက်ရမည့်အရာများကိုလည်း နားလည်နိုင်စေပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် “နံနက်ပူဇော်သက္ကာ” နှင့် “ညဦးပိုင်းပူဇော်သက္ကာ” ရှိပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဣသရေလလူမျိုး၏ဝိညာဉ်ရေးတွင် အလွန်အရေးကြီးပြီး နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်သဖြင့် ဝတ်ပြုသူအပေါင်းတို့သည် စုဝေးဆုတောင်းကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏ အမှုတော်နှင့် အလိုတော်မှ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းကို မလိုလားသကဲ့သို့ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော မီးရှို့ရာယဇ်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အရာကိုမျှ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ မီးရှို့ရာယဇ်ကို လောင်သောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ကျန်ကြွင်းသောမီးခဲတို့ကို ယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ နံ့သာပေါင်းကို ပူဇော်ရာ ရွှေယဇ်ပလ္လင်သို့ ဆောင်သွား၍၊ နံ့သာပေါင်းသည် သခင်ဘုရားရှေ့တော်၌ ပူဇော်သော ဆုတောင်းခြင်းတစ်မျိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် နံနက်နှင့်ညဦးယံ ပူဇော်သက္ကာအတွက် စုဝေးကြပြီး၊ မီးရှို့ရာ ယဇ်မှ မီးခဲကို အသုံးပြု၍ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ရန် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
မှတ်ချက်- ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ညဦးယံယဇ်ပူဇော်ချိန်၌ ဘုရားသခင်ထံ တော်မှန်စွာနှင့် စိတ်ထက်သန်စွာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဆိုးရွားလှသော ဝိညာဉ်ရေးယိုယွင်းမှုအချို့ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပုံကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ (ကြည့် ၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၈:၂၉-၄၁ နှင့် ဧဇရ ၉:၁-၁၀:၄)
ယခု သတ္တမတံဆိပ်ခေတ်တွင် အလွန်လိုအပ်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သင့်သည်။ ဘုရားကျောင်းသည် ပဉ္စမတံဆိပ်၊ ယဇ်ပလ္လင်အောက်၊ ယဇ်ပလ္လင်အောက်၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် တဖန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့ရှေ့၌ ပူဇော်သောယဇ်များစွာ၏ပြာများကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ဧဝံဂေလိနေ့၏ ဤညနေခင်းတွင်၊ ညနေခင်းပူဇော်ပွဲအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဝိညာဏယဇ်ပလ္လင်တွင် တစ်ဖန်စုရုံးရန် လိုအပ်သည်။ (ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဧဝံဂေလိနေ့၏ နံနက်ခင်းအချိန်၌ စုဝေးကြပြီး၊ ဝိညာဉ်ရေးအရ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မီးသည် ၎င်းတို့၏ မီးရှို့ရာယဇ် တစ်ခုလုံးကို လောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်— ၎င်းတို့အား သတိရပါ။ မှတ်ချက်- နေ့၏အချိန်၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်ခဲ့သည်မှာ နံနက် ၉ နာရီ သို့မဟုတ် ဂျူးလူမျိုးတို့၏နေ့၏တတိယနာရီဖြစ်ပြီး၊ နံနက်ယဇ်ပူဇော်ချိန်ဖြစ်သည့်- “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအရာတို့သည် ယစ်မူးသည်မဟုတ်၊ သုံးနာရီအချိန်ဖြစ်သည်ကို သင်တို့ထင်သည်အတိုင်း၊ နေ့ရက်။”—တမန်တော် ၂:၁၅၊
ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပူဇော်သက္ကာ (မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ပူဇော်သက္ကာ)ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးဖြင့် အပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းစေကြောင်း သိမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။ “သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့” ၏ဆုတောင်းချက်များ၊ ယေရှု၏လက်တော်မှနံ့သာပေါင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းပဌနာပြုသည့် ရွှေပလ္လင်ပေါ်၌။ မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ် ၈း၃ တွင် “သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့” ၏ဆုတောင်းချက်များဖြင့် ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ ၅ ခုမြောက် တံဆိပ်တွင် ယဇ်ပလ္လင်အောက်မှ ကျယ်လောင်စွာ ထက်သန်စွာဆုတောင်းသံကိုလည်း ကြားခဲ့ရသည်– “အိုထာဝရဘုရား၊ သန့်ရှင်း၍ မှန်ပါ၏လော၊ မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့အပေါ်၌ ငါတို့၏အသွေးကို တရားစီရင်၍ လက်စားချေတော်မမူသလော။ ~ ဗျာဒိတ် ၆:၁၀
ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံကို တံပိုးမှုတ်ရန် သတ္တမတံဆိပ်ရှိ အသင်းတော်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင် ယဇ်ပလ္လင်မှမီးကို ကျွန်ုပ်တို့၏မြေအိုးများထဲသို့ မချလိုက်ပါက၊ ထို့နောက် “အသံ၊ မိုဃ်းချုန်းခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း” ရှိလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၈:၅) တိတ်ဆိတ်မှုပြိုကွဲလိမ့်မည်။ ! ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမှန်ကန်သောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေသို့ လူများကို ပညာပေးရုံမျှမကပါ။ လူတွေဟာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သဖို့အတွက် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယဇ်ပူဇော်တဲ့ မေတ္တာပလ္လင်မှာ ဝိညာဉ်ရေးအရ စုရုံးလိုကြရမယ်။ “အသံများ၊ မိုးချုန်းသံများ၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း” သည် ဘုရားသခင်သာလျှင် ထုတ်ပေးနိုင်သော အရာများဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် “အဲဒါကို အကောင်အထည်ဖော်” ရုံနှင့် မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နွေးထွေးမှုကို တုန်လှုပ်စေရမည်၊
“ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ဆောင် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် မုတ်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်ကြားတွင် ငိုကြစေနှင့်၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို နှမြောတော်မူပါ၊ သာသနာပလူတို့သည် အုပ်စိုးရမည်အကြောင်း ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းငှါ အမွေကို မပေးတော်မမူပါနှင့်။ သူတို့၏ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု လူများကြားပြောကြလော့။ (ယောလ ၁:၁၇)၊
ကျန်သောဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ဟောပြောပြီး ထင်ရှားစေသော သတ္တမတံဆိပ်၌သာရှိသည်ဟု ဆိုလိုသလော။ နံပါတ်တစ် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်တိုင်းအတွက် ပေးထားသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုအချိန်တွင် ထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သောအရာများအတွက် အတိတ်က ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် နားလည်မှုကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဘုရားသခင်က ထုတ်ဖော်ပြသထားသောအရာကို ယူဆောင်သွားကာ ၎င်းကို ထပ်လောင်းပြီး ၎င်းထံမှ ဖယ်ထုတ်ကာ ၎င်းတို့အတွက် ဂုဏ်ကျက်သရေကို ယူဆောင်သွားသော လူများ—ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောစိတ်ဝိညာဉ်များကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ သို့သော် လူမည်သို့ပင်ပြုစေကာမူ၊ သတ္တမတံဆိပ်တွင် ဗျာဒိတ်သတင်းတရား၏ပြည့်စုံမှုကို “တံပိုးမှုတ်” ရန် သာ၍ကြီးသောတာဝန်ရှိသေးသည်။ တံပိုးခုနစ်ခုနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသူ (တံပိုးခရာ ကောင်းကင်တမန်များ သို့မဟုတ် သံတမန်များ) သည် “တံဆိပ်ခတ်သည့်ခေတ်” ခုနစ်ခုစီတွင် ဝိညာဉ်ရေးအရဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ၎င်းတို့တစ်ဦးစီက ထပ်မံဖော်ထုတ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အတိတ်ကို အသုံးချရုံတင်မကဘူး...
မှုတ်ခုနစ်လုံးကို တီးခတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သို့သော် အသက်အရွယ်တစ်ခုစီ၏ ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲများနှင့် အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းစကားကို အဘယ်ကြောင့် ထပ်၍ဖုံးကွယ်ထားသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဘုရားသခင်သည် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့် အရာများကို အမြဲလုပ်ဆောင်သည်။ တံဆိပ်ခုနစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းတရား၏အသေးစိတ်အချက်ကို ပိုမိုရင်းနှီးသူတစ်ဦးက၊ ဤသတင်းစကားသည် မှားယွင်းသောဘာသာရေးအခြေအနေများ၊ အယူဝါဒများနှင့် ချာ့ချ်များအားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြသထားပြီး စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်ဘုရားသခင်၏တစ်ဆူတည်းသောအသင်းတော်တို့ကို စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ပေါ်ပေါက်လာကာ ကွဲကွာသွားသည်ကို သိရှိနားလည်လာကြသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဗျာဒိတ်တော်များ (နှင့် သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး) ဟောပြောခြင်းဖြင့် လူများစွာသည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်း၏ သမ္မာတရားနှင့် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်တစ်ဆူတည်းအတွက် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် အထူးသဖြင့် သတ္တမတံဆိပ်ခတ်စဉ်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ဟု အမည်ပေးထားသည့်နေရာအနီးတွင် ဤအတိအကျတူညီသော မှားယွင်းသောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများ၊ အယူဝါဒများနှင့် အသင်းတော်ကွဲကွဲမှုများ အများအပြားကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဝိညာဉ်ရေးအရ၊ ဧဝံဂေလိတရားနေ့တစ်ခုလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှသည် တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာ၏ လှည့်ဖြားမှု၊ နာကျင်စေမှု၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနှင့် ကွဲပြားမှုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မှားယွင်းသောဝိညာဉ်သည် ချာ့ခ်ျအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ချည်နှောင်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ကျေးကျွန်စစ်စစ်များ ဝတ်ပြုရာနေရာ၌ “လည်” နေသောသူများအပါအဝင် နတ်အတုများသည် လူတို့မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တံပိုးခုနစ်လုံးသည် ဘုရားသခင်၏လူများကို သတိပေးပြီး ၎င်းတို့ကို တဖန်စုရုံးရန် ခေါ်ခြင်းသည် အလွန်သင့်လျော်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်တွင် ချည်နှောင်ထားသူများကို တစ်ဖန်ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဗျာဒိတ်စီရင်ခြင်းနှင့် အလင်းကို ထပ်မံထွက်ပေါ်လာစေရမည်။ ဗာဗုလုန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် သူ့ကိုယ်သူ “ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော်လည်း၊
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်၏ရှုံးနိမ့်ခြင်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး ၁၇ ၏ဝိညာဉ်ရေးပြည်တန်ဆာဘ၀၊ သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များအပြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သောခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအားလုံး၏သစ္စာမဲ့အခြေအနေများ) နှင့်ကျန်ကြွင်းသောရိုးသားသောဝိညာဉ်များကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအကြောင်း။ ဤအခြေအနေ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည် အထူးသဖြင့် တစ်ချိန်က ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုကို အမှန်တကယ်သိခဲ့သောသူများကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်နှလုံးနောက်ပြန်လှည့်ကာ ယခု ယေရှုအပေါ် ၎င်းတို့၏မေတ္တာနှင့်သစ္စာကို အတုအယောင်သာလုပ်ဆောင်နေသူများကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်သည် ဝိညာဉ်ရေးမြို့တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်ဆီးရန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မြို့နှင့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည့် “သန့်ရှင်းသောမြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့သစ်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဘုရားသခင်မှဆင်းသက်၍ ခင်ပွန်းသည်အတွက် တန်ဆာဆင်ထားသော သတို့သမီးအဖြစ် ပြင်ဆင်ထားသော ယေရုရှလင်မြို့သစ်” (ဗျာဒိတ် ၂၁:၂) ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်သည် ယေရှုသည် ဘုရင်များ၏ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သခင်တို့၏သခင်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီး သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် နောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ သူသည် လူတို့ကို ဒုစရိုက်ပြုခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခု၊ ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောသတို့သမီးတစ်ဦးရှိမည်ဟုလည်း ၎င်းကပြောပြီး ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်သေးသည်။ ယေရှုသည် မိမိသွားရာလမ်း၊ ထို့ကြောင့် ဝိညာဏဗာဗုလုန်သည် သူဖြစ်သည်—ဝိညာဏသစ္စာမဲ့ပြည်တန်ဆာနှင့် ဆိုးသွမ်းသောမြို့ဖြစ်ခြင်းအတွက် အပြည့်အဝဖော်ထုတ်ခံရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဗာဗုလုန်မှ ဝိညာဏဗာဗုလုန်၏လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော မိမိ၏ကျေးကျွန်အစစ်များကို ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။
“ငါ၏လူတို့၊ သင်တို့သည် သူ၏ဒုစရိုက်ကို မဆက်ဆံကြနှင့်၊ သူ၏ဘေးဒဏ်မှ မခံမယူမည်အကြောင်း၊ ငါ့လူတို့၊ သူ့အထဲက ထွက်သွားကြလော့ဟု ကောင်းကင်မှ အခြားသောအသံကို ငါကြား၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူ၏အပြစ်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်၍၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဒုစရိုက်များကို အောက်မေ့တော်မူပြီ။” (ဗျာဒိတ် ၁၈:၄-၅)
သို့သော် ဤထိတွေ့မှုနှင့် သူမ၏လှည့်စားသောရဲတိုက်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် နည်းလမ်းကျကျ ချမှတ်ထားသော အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သူသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အလားတူအစီအစဥ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့်အရာအတွက် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခင်အစီအစဉ်- ယေရိခေါမြို့ကို အနိုင်ယူပါ။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကတိထားရာပြည်ကို မသိမ်းပိုက်မီတွင်၊ ယေရိခေါမြို့ (ယေရိခေါမြို့) ဖြစ်သည့် ခါနာန်ပြည်၏ အမာခံနယ်မြေကို သိမ်းပိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ မြို့ရိုးများပြိုကျစေရန်အတွက်၊ ဤသည်မှာ သူတို့လိုက်လျှောက်ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မစာခုံးကို တံပိုးခရာမှုတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ခုနစ်ယောက်နှင့် စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည် ယေရိခေါမြို့ကို ခြောက်ရက်ပတ်လုံး (တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်) ချီတက်ကြ၏။
ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ထိုအကျင့်ကို ပြုကြသော်လည်း၊
ထိုအခါ လူအပေါင်းတို့သည် မြို့ရိုးတဘက်၌ ကြွေးကြော်၍ မြို့ရိုးများ ပြိုကျလာ၏။
သူတို့သည် မြို့တော်၏ အဖိုးတန်သတ္တုများကိုသာ ယူဆောင်ရန်သာဖြစ်ပြီး ကျန်အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် မီးရှို့ရန်ဖြစ်သည်။
ယေရိခေါမြို့ကျဆုံးခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဗာဗုလုန်၏လှည့်ဖြားမှုနှင့် သူ၏မှားယွင်းသောအယူဝါဒအားလုံးနှင့် သူမ၏ ကဲ့ရဲ့ဖွယ် (မလေးစားထိုက်သော) ဘာသာရေးအသင်းတော်အမည်များ၊ သားရဲ၏အမှတ်အသားနှင့် သူ၏အမည်နံပါတ် ( သို့မဟုတ် သားရဲနံပါတ်၊ 666)။
ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးသငယ်ကဖွင့်တဲ့ ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေ့ (သို့မဟုတ်) အသင်းတော်ခေတ်တစ်ခုစီအတွက် တံဆိပ်ခုနစ်ခု၊
သတ္တမတံဆိပ်တွင် တံပိုးခုနစ်ခုကို ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးက တံပိုးမှုတ်ကြသည်။
သတ္တမတံပိုးမှုတ်၌ “ဤလောက၏နိုင်ငံတို့သည် တိုင်းနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ငါတို့၏သခင်ခရစ်တော်၏ အုပ်စိုးခြင်းခံရ၍ ကာလအစဉ်အဆက် စိုးစံရလိမ့်မည်” ဟူသောကြေငြာချက်ပါရှိသည် (ဗျာဒိတ် ၁၁း၁၅)၊ ဓမ္မစာရီ - ဤအရာအားလုံးသည် သားရဲ၏နိုင်ငံတော် (သားရဲ၏အမှတ်အသားနှင့် သူ၏အမည်နံပါတ် 666 အပါအဝင်) ရှည်လျားကျယ်လောင်သောသတင်းစကားဖြင့် ချက်ခြင်းတွင် နောက်တော်သို့လိုက်သည် - ဗျာဒိတ် ၁၂ နှင့် ၁၃ ကိုကြည့်ပါ။
ထို့နောက် ဗျာဒိတ် ၁၅ နှင့် ၁၆ တွင် ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါးတို့သည် နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ပါးနှင့် ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါးတို့ကို သွန်းလောင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်အမျက်တော်နှင့် ပြည့်နေသော ပုလင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ဖန်ပုလင်းများထဲမှ သွန်းလောင်းခြင်း ပြီးဆုံးသောအခါတွင် အကြီးမားဆုံးသော ဝိညာဉ်ရေးငလျင်ကြီး ပေါ်လာပြီး...
ထို့နောက် ဝိညာဏဗာဗုလုန်ကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် (မှတ်ချက်- ရှေးဗာဗုလုန်သည်လည်း ကြီးမားသောတံတိုင်းများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် သူမ၏ကြီးမားသောတံတိုင်းများသည် လှည့်စားခြင်း၏နှောင်ကြိုးများဖြစ်သည်)၊ ထို့နောက် သူမသည် ဖြိုချ၍ ထာဝရမီးရှို့ခြင်းခံရသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၇ & ၁၈ ) “ကောင်းကင်ဘုံ၊ သန့်ရှင်းသော တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက်တို့၊ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား သူ့ကို အပြစ်ပေးတော်မူပြီ။” (ဗျာဒိတ် ၁၈:၂၀)၊
(၇) တံပိုး (၇ ခုမြောက် တံဆိပ်) ပါ၀င်သည့် တံဆိပ် ၇ လုံး၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ၇ ပုလင်း (တံပိုး ၇ လုံး) ပါ၀င်သည် = “ဖြစ်ခြင်း” သို့မဟုတ် “ဖြစ်ခြင်း” သို့မဟုတ် “ပြီးပြီ” သို့မဟုတ် “ထိမ်းမြားလက်ထပ်”
အလုပ်ပြီးမြောက်ရန် တံဆိပ် ၇ ခု၊ တံပိုး ၇ လုံးနှင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ၇ ပုလင်းတို့ လိုအပ်သည်။ ဖန်ပုလင်းများထဲမှ တစ်လုံးကို သိမ်းဆည်းထားပါက ဤကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို ဆန့်ကျင်သည့် တံပိုးမှုတ်ခြင်း ၇ ခုမြောက် တံပိုးမှုတ်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် နောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်ခြင်း မပြီးပြတ်ပါ။ တံပိုးတစ်ခုမပြီးပါက၊ တံပိုး၇ခုကို တံဆိပ်(၇)ခုတွင် တီးခတ်သောကြောင့် နောက်ဆုံးတံဆိပ်သည် မပြည့်စုံပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစီအစဉ်ကို လုံး၀မပြီးမြောက်ပါက၊ သုံးခုစလုံးသည် တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားသည့်အတိုင်း လူများသည် လုံးဝလွတ်လပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် “ပြည့်စုံ” သို့မဟုတ် “ပြီးမြောက်သည်” အစား (သားရဲနှင့် ဗာဗုလုန်၏လှည့်စားခြင်းနည်းလမ်းများမှ ကင်းစင်ပြီး ပျက်စီးနေသောရုပ်တုမှ ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်မရှိဘဲ) ၎င်းတို့ကို မပြည့်စုံဟု အမှတ်အသားပြုရမည့်အစား သို့မဟုတ် 666 ( မပြည့်စုံသောနံပါတ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။) အထူးသဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် နေရာများစွာတွင် “ပြည့်စုံခြင်း” ကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် နံပါတ်7ကို အသုံးပြုကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင် ဗျာဒိတ်သတင်းတရားကို ရောနှောခြင်းမရှိဘဲ အပြည့်အ၀ဟောပြောရန် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ကြောင့် သတ္တမမြောက် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် (နောက်ဆုံးပုလင်း) သွန်းလောင်းသောအခါ “ပြီးပြီ” ဟု ပလ္လင်တော်မှ ကောင်းကင်ဗိမာန်တော်မှ ကြီးစွာသော အသံကြီး ထွက်လာ၏။ (ဗျာဒိတ် ၁၆:၁၇) ဤနောက်ဆုံးပုလင်းကို “လေထဲသို့” သွန်းလောင်းပြီး “လေ၏တန်ခိုးရှင်၊ မနာခံသောသူတို့၌ ယခုပြုသောဝိညာဉ်တော်” ပေါ် သွန်းလောင်းကြောင်းပြသခဲ့သည် (ဧဖက် ၂:၂)။ မှားယွင်းသော ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများသည် မှားယွင်းသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်း ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းလင်းစွာပြသသည်။ ယေရှုခရစ်၏ကျေးကျွန်စစ်စစ်များ ဝတ်ပြုရာနေရာမှန်တွင် “ဝိုင်းရံ” ရန်ကြိုးစားသူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင် သူတို့နေထိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်သည်။
ဧဖက်မြို့သားများထံ ကိုးကားထားသော ဤကျမ်းချက်ကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာကြည့်ကြပါစို့။
ဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ သေလွန်သောသူ၊ ရှေးကာလ၌ သင်တို့သည် ဤလောက၏လမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်ကြကုန်သော အာကာသ တန်ခိုးရှင်မင်း၏ အလိုအရ၊ မနာခံမှု၌ ယခုကျင့်သော ဝိညာဉ်သည် ရှေးကာလ၌ ဖြစ်ကုန်သော ကိလေသာတို့၌ ကျင်လည်ကြကုန်၏။ ဇာတိပကတိနှင့် စိတ်၏အလိုဆန္ဒကို ပြည့်စုံစေ၍၊ အမျက်ဒေါသ၏ သားသမီးတို့သည် ပကတိအားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။” ~ ဧဖက် ၂:၁-၃
ဇာတိပကတိကို မဆက်ဆံပါက၊ လေ၏တန်ခိုးရှင်၏အလိုအတိုင်း လျှောက်လှမ်းခြင်း (သာသနာ့ ဖုံးလွှမ်းခြင်း) ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် မိမိတို့ကိုယ်ကို ပြန်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “အမျက်ဒေါသ၏သားသမီးများ” ဖြစ်ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောသဘာဝတွင် ထိုမပြည့်စုံမှုဖြင့် အမှတ်အသားပြုကြလိမ့်မည်- 666။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဒေါသ၏သားသမီးများ” ဝိညာဉ်အပေါ်၌ သွန်းလောင်းထားသော အမျက်တော်ဖန်ပုလင်းများကို လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည့်အ၀ နောင်တရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရေးဇာတိပကတိကို စွန့်ပယ်ရန် လှုံ့ဆော်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဗျာဒိတ် 15:8 တွင် လူသားသည် နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ခုလုံးတိုင်အောင် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မ၀င်ရောက်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်ကြားထားပါသည်- ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ဖန်ပုလင်းများ လုံးဝသွန်းလောင်းခဲ့သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင် တရားစီရင်ခြင်း မခံရလျှင် လူတို့သည် လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပေ။ သတင်းစကားသည် လွဲမှားမှုအားလုံးအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား သွန်းလောင်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ သန့်ရှင်းမှု အပြည့်အဝမရသောအခါတွင် လူတို့ရရှိသည့် မပြည့်စုံသော အတွေ့အကြုံအရ (သူတို့တွင် ဘုရားမဟုတ်သော ရုပ်တုတစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့မရှိသောကြောင့် သားရဲကဲ့သို့ ဇာတိပကတိရုပ်တု၊ ခရစ်တော်အတွင်း၌ရှိသော ဘုရားသဘောသဘာဝ။)
“ထိုအခါ ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် တန်ခိုးတော်ကြောင့် မီးခိုးနှင့် ပြည့်နေ၏။ ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါး၏ ဘေးဒဏ်ခုနစ်ပါး မပြည့်စုံမှီတိုင်အောင် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ အဘယ်သူမျှ မဝင်နိုင်။” (ဗျာဒိတ် ၁၅:၈)
666 = "မပြည့်စုံ" = သားရဲအရေအတွက်
ယခု နံပါတ်6သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ “မပြည့်စုံ” သို့မဟုတ် “မပြည့်စုံ” နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ “နီး” သော်လည်း တိုတောင်းသည်။ သခင်ယေရှု၏ ဗျာဒိတ်တော်အမှန်တရားအားလုံးကို လူများက အပြည့်အဝလက်ခံခြင်းမပြုပါက (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုမဟုတ်ဘဲ၊ ထိုသူအား ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် အရှင်သခင်အဖြစ် လုံးလုံးလျားလျား အသိအမှတ်ပြုလက်ခံခြင်း) သည် ၎င်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးမပြည့်စုံခြင်း သို့မဟုတ် ဇာတိသဘောရှိခြင်းသို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတိပကတိလူ၏ (သားရဲကဲ့သို့) ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်မညီ။ “အနှစ်ချုပ်” သို့မဟုတ် သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနံပါတ်ကို ရေတွက်ပါက၊ ၎င်းသည် မပြည့်စုံသောနံပါတ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်- 666။ ထို့နောက် ဗာဗုလုန်၏ဝိညာဉ်ရေးလှည့်ဖြားမှု၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့နှင့် သူမကိုသယ်ဆောင်သော သားရဲ၏နားလည်မှုတွင် ၎င်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အမှတ်အသားပြုမည်ဖြစ်သည်။
666 သည် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ချိန်ခွင်လျှာတွင် ဝိညာဉ်ရေးအရ “ချိန်တွယ်” သည့် နံပါတ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မပြည့်စုံသောသားရဲသဘာဝသည် သခင်ယေရှုယူဆောင်လာသည့် ပြီးပြည့်စုံသောမြင့်မြတ်သောသဘာဝနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သားရဲသဘာဝ၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် ရှိနေသူများသည် (နှင့် ဗာဗုလုန်၏သားရဲနိုင်ငံ) သည် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ ပြည့်စုံမှုကြောင့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလိမ့်မည်။ နံရံပေါ်တွင် (လက်ဖြင့်) ရေးထားသော ဗာဗုလုန်ဘုရင်သည် ဒံယေလကို အနက်ပြန်ဆိုရန် အလွန်တုန်လှုပ်သွားသောအခါ ရှေးဗာဗုလုန်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
“ဤကား၊ MENE၊ MENE၊ TEKEL၊ UPHARSIN ရေးခဲ့သောစာဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် MENE; ဘုရားသခင်ရှိတော်မူ၏။ သင်၏နိုင်ငံကို ရေတွက်၍၊, နှင့် ပြီးပါပြီ။. TEKEL; မင်းက ချိန်ခွင်များတွင် ချိန်တွယ်သည်။ပြီးတော့ အနုပညာကို လိုလားတယ်။ PERES; ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံသည် ကွဲပြားပါ၏။မေဒိနှင့် ပေရသိလူတို့အား ပေးတော်မူ၏။” ~ ဒံယေလ ၅:၂၅-၂၈
နောက်ဆုံး 7th ပုလင်းကို သွန်းလောင်းပြီး ကောင်းကင်က အသံက “ပြီးပြီ” လို့ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်က ပိုင်းခြားထားသလိုမျိုး ရှေးဗာဗုလုန်ကို ပိုင်းခြားခဲ့တယ်။
ယခုကျမ်းတွင် သားရဲ၏နံပါတ် (၆၆၆) ကို ဤသို့ဖော်ပြသည်– “ဤတွင် ပညာပေတည်း။ ဥာဏ်ရှိသောသူသည် သားရဲအရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ။ သူ့နံပါတ်က ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ်ခြောက်” (ဗျာ။
ယေရှု၏ကျေးကျွန်အစစ်မဟုတ်သူများကို သားရဲပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားကြောင်း ယခု သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
“ဧဖက်မြို့၌ ငါသည် လူတို့နည်းအတိုင်း သားရဲနှင့်တိုက်လျှင် အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ စားသောက်ကြကုန်အံ့။ မနက်ဖြန်အတွက် ငါတို့သေတယ်။" (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၃၂)၊
“သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က၊ သူတို့ရဲ့ ပရောဖက်တစ်ဦးတောင်မှ၊ Cretians တွေဟာ အမြဲတမ်း မုသာဝါဒ၊ သားရဲဆိုးတွေ၊ နှေးကွေးတဲ့ ဝမ်းစာတွေပဲလို့ ပြောကြတယ်။ (တိ ၁:၁၂)၊
ပကတိသားရဲတို့မူကား၊ လုယူဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ဖန်ဆင်းခံရသော တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင်၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၌ ရှင်းရှင်းပျက်စီးလိမ့်မည်။” (၂ပေ၊ ၂း၁၂)၊
“ထိုသူတို့သည် မသိသောအရာတို့ကို မကောင်းပြောတတ်သည်ကား၊ သဘာဝအတိုင်း သိသောအရာကို တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ဖောက်ပြန်တတ်၏” (ယုဒ ၁:၁၀)၊
“မဖောက်ပြန်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ဖောက်ပြန်တတ်သော လူ၊ ငှက်များ၊ ခြေလေးချောင်းသား၊ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ ရုပ်တုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေတော်မူ၏။” (ရောမ ၁:၂၃)၊
တစ်ဖန် ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၈ တွင် 666 သည် “သားရဲအရေအတွက်” ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် “လူအရေအတွက်” ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ သဘာဝတရားသည် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော (သားရဲနှင့်တူသည်)။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံရန် ကြွလာတော်မူသောကြောင့် သူ၏စုံလင်သောပူဇော်သက္ကာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်ပြီး ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းစေရန် ကြွလာပြီး ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်ရေးပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်၊ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ မူလနှလုံးကို ဖန်ဆင်းပုံကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘဲ၊ မပြည့်စုံသူ (၆၆၆)။
“ကြိုသိတော်မူသောသူသည် ညီအစ်ကိုများစွာတို့တွင် သားဦးဖြစ်မည်အကြောင်း၊ သားတော်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီဖြစ်ရန် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတော်မူ၏။” (ရောမ ၈:၂၉)၊
“သို့သော်လည်း၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ဖန်ခွက်၌ရှိသော ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစွာမြင်လျက်၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုန်းအသရေကို ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ဘုန်းအသရေသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။” (၂ ကောရိန္သု ၃:၁၈)
“ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ပညာအတတ်နှင့် အသစ်ပြုပြင်သော လူသစ်ကို ဝတ်ဆင်ကြပြီ” (ကောလောသဲ ၃:၁၀)။
ထို့ကြောင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13th အခန်းကြီးတွင် မပြည့်စုံသော 666 ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသူများကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက်၊ အခန်း 14 တွင် “ပြီးပြည့်စုံသည်” ကို မတူညီသောနည်းဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ Sion တောင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်နှင့်အတူ ရပ်နေကြပြီး သူတို့၏နဖူးတွင် ကောင်းကင်ခမည်းတော်၏ အမည်ကို ရေးထားသည်။ သူတို့သည် တိရစ္ဆာန်နှင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် ခွဲခြားသိမြင်ကြသည်။
“မပြည့်စုံ” သူများသည် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ရှာဖွေပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ သားရဲ၏နံပါတ်ကို “သူ၏အမည်နံပါတ်” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် (ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၇)၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဗျာဒိတ် ၁၇:၃ တွင်၊ “ကျိန်ဆဲသောအမည်များ” နှင့်ပြည့်စုံသောသားရဲကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ နာမည်ကဘာလဲ။ တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအချို့ကို သီးခြားခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် “ဝိသေသလက္ခဏာ” ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဤအခြေအနေတွင်၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်ကို မရိုသေ၊ မရိုသေသော ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ လေးလေးစားစား ခွဲခြား၍မရသော အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတူ ဘုရားသခ။
ယေရှုခရစ်နှင့် ခွဲခြားသိမြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာမှမဟုတ်ပါ၊ ယေရှုသည် အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်က “သူတိုးပွါးသော်လည်း ငါလျော့ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယောဟန် ၃:၃၀) ထို့ကြောင့် တမန်တော်ပေါလုသည် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို “ညစ်ညမ်းသောအစုတ်များ” အဖြစ် မှတ်ယူခဲ့သည်။ ပေါလု၏ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုလုံးမှာ ယေရှုခရစ်၌ သူ၏လက္ခဏာကို ဆုံးရှုံးစေခြင်းဖြစ်သည်– “ငါသည် ကိုယ်တော်ကို သိစေခြင်းငှာ၊ ထမြောက်ခြင်းတန်ခိုးနှင့် သူ၏ဆင်းရဲခြင်း၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ခံရ၍ သေသည်တိုင်အောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (ဖိ ၃:၁၀)၊
လူတို့သည် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် မပြည့်စုံသောအခါ (ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝ၏ ပြည့်စုံမှု ကင်းမဲ့ခြင်း) သည် ၎င်းတို့နှင့် အခြားသူတို့အတွက် ထင်ရှားပါသည်။ ချို့တဲ့တာကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ တစ်ခုခုလုပ်ရပေမယ့် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မပျက်စေချင်ဘူး။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား ဖုံးအုပ်ရန် လိုအပ်သည့်အရာ သို့မဟုတ် ချို့တဲ့သောအရာကို “ဖြည့်စွက်” သည်ဟု ထင်ရသည့်အစား၊ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုရန် အခြေအနေများကို ပေါင်းထည့်သည်၊ သို့မဟုတ် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကိုယူကာ ထိုဒေသအသင်းတော်အပြင် အခြားသူများကို တောင်းဆိုရန် ကြိုးစားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အမှန်တရားများစွာကို သိရှိပြီး သွန်သင်ပေးသည့်အခါတိုင်း၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် “အထောက်အထား” အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးကြသည်။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတိုင်း၊ သူတို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကြားမှာ အမြဲတမ်း စိတ်ထိခိုက်ပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲစေတယ်။ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖြင့် “အမှတ်အသားပြု” လာကြသည်။ တမန်တော်ပေါလုက သူသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောလက္ခဏာမဟုတ်ဘဲ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းခြင်း၏ အမှတ်အသားများကို ဆောင်ထားသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
“သို့သော်လည်း၊ ဤလောကသည် ငါ့အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်မှတပါး၊ ငါသည် ဘုန်းကြီးစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်တားမြစ်တော်မမူ။ အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုခရစ်၌ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် အဘယ်အရာမျှ အကျိုးမရှိ၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံရဘဲ၊ ဤနည်းဥပဒေသအတိုင်း ကျင့်ဆောင်သမျှသော သူတို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ကရုဏာတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဣသရေလအမျိုးအပေါ်၌ ရှိစေသတည်း။ ယခုမှစ၍ အဘယ်သူမျှ ငါ့ကို မနှောင့်ရှက်စေနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သခင်ယေရှု၏ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ အမှတ်အသားကို ဆောင်လျက်၊ (ဂလာတိ ၆:၁၄-၁၇)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကင်းကွာစေရန်အတွက် အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ "အပိုအထူး" မလိုအပ်ပါ။ ယေရှုခရစ်၏သစ္စာနှင့်နှိမ့်ချသော “မည်သူမျှ” အစေခံအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့အတွက် ဆုံးရှုံးသွားသောကမ္ဘာကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတွင် ထည့်မတွက်ဘဲ ရှာဖွေကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ခြေတော်ရာအတိုင်း လျှောက်လှမ်းရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းရွက်ရာတွင် ပြီးပြည့်စုံမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် လွယ်ကူလွန်းလှသည်။ တမန်တော်ပေတရုပင် ဤပြဿနာအတွက် တည့်မတ်ပေးခဲ့ရသည်။ မဿဲ ၁၆:၁၆ တွင် ပေတရုသည် ခရစ်တော်မည်သူဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်– “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်၊ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏” သို့သော် ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ခွဲခြား၍မရ၊ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ၎င်းကိုသိရှိသောအခါ ပေတရု အလွန်အံ့သြသွားသည်။
“ထိုအခါ ပေတရုသည် သူ့ကိုဘမ်းဆီး၍ ဆုံးမတော်မူသည်ရှိသော်၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်နှင့် ဝေးပါစေသော။ သူသည်လှည့်၍ ပေတရုအား၊ စာတန်၊ ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့။ သင်သည် ငါ့အတွက် ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာတို့ကို မြိန်စေသည်မဟုတ်။ ထိုအခါ ယေရှုက၊ ငါ့နောက်သို့လိုက်လိုသောသူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်၍ မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်စေဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၆:၂၂-၂၄)
ပေတရုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်၏အရှက်ကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းထက် လူတို့နှင့် မည်သို့ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ကို ပေတရုက ပို၍စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပေတရုသည် သူ့အတွက် “ပြစ်မှားခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် လူတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့ အသင်းတော်လို့ ဆိုကြတဲ့ နေရာတဝိုက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေဆဲပါပဲ။ သူတို့သည် အခြားသူများပြောမည့်အရာကို ပိုစိုးရိမ်ကြပြီး အချို့သောအုပ်စုတစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့၏အထောက်အထားအတွက် ပိုစိုးရိမ်ကြပြီး ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းကြမည်မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှု ကြွလာ၍ ကယ်တင်ရန် ကြွလာသော ဆင်းရဲသော ဝိညာဉ်များကို ကယ်တင်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သူငယ်ချင်း စသည်တို့၏ အမှတ်သညာ ကျဆင်းခြင်းကို မခံနိုင်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်၏အရှက်သည် သူတို့အား စော်ကားလာသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ပတ်လည်ရှိ အချို့သောသူတို့သည် ယေရှုခရစ်ကို စော်ကားခြင်းဖြစ်ကြ၏။
အခန်း ၁၉ - ဘုရင်တို့၏ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင်
ယခုအခါတွင် ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်သည် အပြည့်အဝ ဖော်ထုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပြီး အခန်းကြီး ၁၉ တွင် သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ရပြီး “ရှင်ဘုရင်နှင့် ထာဝရဘုရားသခင်” ယေရှုကို ယခု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သားရဲနှင့် ပရောဖက်အတုအယောင်တို့ကိုလည်း “ကန့်နှင့်လောင်သောမီးအိုင်ထဲသို့ အသက်ရှင်လျက် ပစ်ချ” ခြင်းခံရသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်ကြောင်းကို အဘယ်သူမျှ မပြောနိုင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်” ဟုဆိုသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၂:၃) ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝရန် လိုအပ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ဝိညာဉ်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဇာတိပကတိဟောင်း၊ ဇာတိပကတိကို ဂရုမစိုက်ပါက၊ သင်သည် နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် “ယေရှုသည် ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သခင်တို့၏သခင်” ဟု မပြောနိုင်တော့သည့် နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် သွေးဆောင်မှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသို့ ရောက်လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သားရဲသဘာဝ၏ လုပ်ရပ်နှင့် မိစ္ဆာပရောဖက်၏ စိတ်ဓာတ်သည် သင့်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံပေါ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် စွန့်စားရလိမ့်မည်။
အခန်း 20 – လှည့်ဖြားမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်၊ မာရ်နတ်သည် ထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီး အနိုင်ယူသည်။
ထို့နောက် အခန်းကြီး 20 တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝိညာဉ်ရေးအရ နားလည်နိုင်စေပြီး ဧဝံဂေလိတရားနေ့တစ်ခုလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား တင်ပြထားသော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ်တွင် မှားယွင်းသောအသင်းတော်များနှင့် မှားယွင်းသောပရောဖက်များ၏လှည့်စားမှုမျိုးမရှိပေ။ ဗျာဒိတ်သတင်းအပြည့်အစုံ။) ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်သမျှမှာ မာရ်နတ်၊ စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသူများ၊ စာတန်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်– ထို့နောက် နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကို ချမှတ်ပြီး ကွပ်မျက်သည်။
အခန်း 21 နှင့် 22 – “ကြည့်ရှုပါ” ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအစစ်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှိယေရုရှလင်မြို့ ထင်ရှား
တဖန်၊ ဗာဗုလုန်၊ သားရဲ၊ မိစ္ဆာပရောဖက်နှင့် မာရ်နတ်တို့၏လှည့်ဖြားမှုအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်၊ အခန်းကြီး ၂၁ နှင့် ၂၂ တွင် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအစစ်ဖြစ်သော “သိုးသငယ်မယား” နှင့် “သန့်ရှင်းသောမြို့တော်၊ ယေရုရှလင်မြို့သစ်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဆင်းသက်၍ ခင်ပွန်းအတွက် တန်ဆာဆင်သော သတို့သမီးကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်လာ၏။” ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော အသင်းတော်၊ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာအစစ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအပြည့်အစုံကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီ။
နောက်ဆုံးဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ဤသတိပေးချက်ဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ဤစာစောင်၏ ပရောဖက်ပြုချက်စကားကို ကြားနာသောသူတိုင်းအား ငါသက်သေခံသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ဤအရာတို့ကို ထပ်လောင်းလျှင်၊ ဤစာစောင်၌ရေးထားသော ဘေးဥပဒ်ကို ဘုရားသခင်သည် ထိုသူအား ထပ်လောင်းပေးတော်မူမည်။ ဤ​ပရောဖက်ပြုချက်​ကျမ်း​၏​စကား​များ​မှာ၊ ဘုရား​သခင်​သည် သူ​၏​အ​ပိုင်း​ကို အသက်​ကျမ်း၊ သန့်​ရှင်း​သော​မြို့​မှ​၎င်း၊ ဤ​ကျမ်း​၌​ရေး​ထား​သော​အ​ရာ​များ​မှ​လည်း​ကောင်း နှုတ်​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။" (ဗျာဒိတ် ၂၂:၁၈-၁၉)
ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးတွင် ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်နှင့်ပတ်သက်သော မှတ်ချက်များပေးရန် အလွန်ဂရုတစိုက်ရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးက မထောက်ခံတဲ့ တခြားအတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေကို လူတွေက သိလျက်နဲ့ ယူလာတဲ့အခါ၊ သူတို့ရေးထားတဲ့ ဘေးဒဏ်တွေကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် ထည့်ထားတယ်။ စစ်မှန်သော အဓိပ္ပါယ်ကို ပယ်ရှားရန် ကြိုးစားပါက ဖြောင့်မတ်သူ၏ ဆုလာဘ်တွင် ပါဝင်ခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်း ခံရတတ်သည်။
ဤသည်မှာ "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျမ်းချက်တစ်ခုစီအတွက် ဘလော့ဂ်ရေးသွင်းမှုများ ပိုများလာသည်နှင့်အမျှ မှတ်ချက်ပေးရမည့် အခြားအကြောင်းအရာများစွာလည်း ရှိသေးသည်။